06/11/2018 - Page 4 sur 4 -
CENI, HCC, Governemanta, Prezidansa : Hotsarain’ny tantara !
Hikarakara fifidianana tafiditra ao anatin’izany ny fanadiovana ny lisi-pifidianana no andraikitra nankinina tamin’izao governemanta Ntsay Christian izao fa tsy hanadio fako eny Ankorondrano. Tomponandraikitra feno amin’ny fizotry ny fifidianana ireo andrim-panjakana efatra dia ny CENI, …Tohiny
Fifidianana 2018 : Maro ny Malagasy noverezin-jo
Iray andro mialoha ny hiatrehana ny fifidianana ho Filoham-pirenena isika amin’izao fotoana izao. Hatreto, mbola maro ny tsy mazava manodidina izany fifidianana izany. Mbola maro ihany koa ireo velon-taraina fa tsy tafiditra anaty lisim-pifidianana ary …Tohiny